Snow Man – Thet Nandar
သားသား … snow man လုပ်ဖို့ စနိုး ကောက်လာတာ ….
စနိုးကို တွန်းလိမ့်လိုက်ရင် အလိုက်သင့်ပဲ စနိုးဘောလုံးဖြစ်ပီး ဘောလုံး လိမ့်သလို လိမ့်လာ လိုက်တာနဲ့ စနိုးဘောလ်က တဖြည်းဖြည်း ကြီး ကြီးလာတယ်။ ကလေးတွေ အတွက် … snow man လုပ်ရတာ အရမ်းပဲ လွယ်တယ်။ သားသားဆို တခါတည်း ပြလိုက်တာနဲ့ သူ့ဘာသာ သူ စနိုးဘောလ်ကို လိမ့်ပီး တွန်းသွားရင်း snow man … body အတွက် စနိုး ဘောလုံး အကြီး ကြီး လုပ်လာတယ်။
သားသား snow ball ကို တွန်းနေတာ …
လူကြီးတွေ အတွက်ဆို … ကော်ဇော ခေါက်လိမ့်သလိုမျိုး …
ကလေးတွေ အတွက်ဆိုရင် မြေပြင်မှာ ဘောလုံးကို လိမ့်သလိုမျိုး မို့ ….
သားသားက အရမ်း သဘောကျပေါ့ …
SNOW MAN လုပ်ဖို့ လိမ့်လာတဲ့ စနိုးဘောလ်တွေကို ထပ် … တင် လိုက် ပီးတဲ့ အခါမှာ …
SNOW ROCK ပေါ်ကို …
သားသား သူ့ဘာသာ သူ တက် … ပီး …
သီချင်းဆိုလိုက် … ကလိုက် … လုပ်နေတာ …
နောက်ထပ် စနိုးဘောလ်တွေ ထပ် လုပ် …
လက်နှစ်ဖက် နဲ့ ပုတ် .. ပုတ် အပီး စနိုး ဘောလုံးကို ကျစ် ကျစ်လေး လုပ်နေတာ …
SNOW MAN ခေါင်းလေးအတွက် နောက်ထပ် စနိုး ဘောလုံး နောက် တလုံး …
စနိုးဘောလုံးကို မ’ သယ်နေသော သားသား ….
အလယ်က SNOW MAN ဗိုက်သားကို ကြီးကြီးလေး ဖြစ်အောင် …
လိမ့်လာတဲ့ စနိုးဘောလ် ကို တခု နဲ့ တခု ထပ် မတင်ဘဲ …
ဒါဆို SNOW MAN နည်းနည်း ကြီးသွားပီး …
သားသား … အရပ် နီးပါးလောက် ဖြစ်သွားပီ …
သူငယ်ချင်း SNOW MAN နှင့် အမှတ်တရ …
ဘလူးဘယ်ရီ သီးတွေက လေတိုက်လို့ ကြွေသွားတာနဲ့ အသီး သေးသေးလေးတွေ မကျန်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သစ်ကိုင်းခြောက်တွေ ကောက်လာတာ … SNOW MAN က မျက်စိမြေးမြေးလေး နဲ့ ပြုံးပြနေတဲ့ ပုံ ဖြစ်သွားတယ်။
မျက်စိမြေးမြေးလေးနဲ့ ပြုံးပြနေသော SNOW MAN နှင့် သမီးလေး
သားသားကို အပြုံးဖြင့် တုန့်ပြန်နေသော SNOW MAN
နောက်ထပ် သမီး က အိမ်နီးချင်း ရုရှားမလေးတွေ နှင့် SNOW MAN လုပ်နေတာ …
စနိုးဘောလ်လုံးကို လိမ့်နေတာ …
ဒါက အိမ်ရှေ့အိမ်က ရုရှားမိသားစု လုပ်ထားတဲ့ SNOW MAN
ပန်းအိုး ဦးထုပ် အမဲလေးတောင် ဆောင်းထားပီး … တုပ် ၂ ချောင်း ကိုင်ထားသေးတယ် …
စနိုး ဘာဘီကျူး လုပ်မလို့ တဲ့ …
စနိုး အချပ်တွေ တချပ်ပီး တချပ် ထပ်တင်နေတာ … စနိုး ဘာဘီကျူးတဲ့ …
MAPLE အဖူးလေးတွေ စထွက်နေတဲ့ မတ်လ ….
MAPLE အဖူး နီနီလေးတွေ …
ကလေးတွေ ကျောင်းသွားတိုင်း … အဲဒီ ကြောင် အမဲကြီးက သူပါ လမ်းထိပ် ထိ လိုက်ပီး ကျောင်း လိုက်ပို့ပေးတတ်တယ်။
အိမ်နီးချင်း ရုရှား မိသားစု နှင့် သမီးလေး … မိုးလေး ဖွဲဖွဲလေး ရွာနေတဲ့ အချိန် …
ဟိုဘက်လမ်းက ကလေးတွေလည်း ကျောင်းကား စောင့်နေတဲ့ အချိန် …
ထီးလေးတွေ ကိုယ်စီ နဲ့ ကလေး ၃ယောက် နှင့် အတူ ရုရှား အမျိုးသမီး ဦးဆောင်ပီး SNOW MAN လုပ်နေတာ .. ကျောင်းကား မလာခင် အချိန်လေးအတွင်းမှာ ….
သမီးလေး နှင့် SNOW MAN
နှာခေါင်းမှာပါ စနိုးဘောလ်လုံး သေးသေးလေး တပ်ထားသေးတယ်။ ချစ်စရာလေး …
သားသားရဲ့ နှင်းခြေရာလေးများ ….
စနိုး နှင့် ဆော့တိုင်း အရမ်းပျော်နေတတ်သော သားသား ….
စနိုး ရေကန်ထဲကို စနိုးတွေ ပစ်ချနေတာ …
Pesticide Applicator – အဲဒီ မြေကြီးမှာ အင်းဆက် ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းထားလို့ ကလေးတွေ နှင့် ခွေး .. တိရစာန်တွေ ဖြတ်မလျှောက်ဖို့ သတိပေး စာတမ်း ….
မြေကြီးမှာ အဲလို မျိုး ဖြန်းထားတော့ အိမ်ထဲကို အင်းဆက်ပိုးတွေ ကူးမလာတော့ဘူး ….
ကားပါကင်ဝင်းကို သွားတဲ့ လမ်း …
နှင်းကျနေတဲ့ အချိန် …
အိမ်ရာက နှင်းရှင်းတဲ့ ကား …
March 3, 2012 Thet Nandar
2 thoughts on “Snow Man”
နှင်းတွေ အပြင်မှာ မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ 😀 😀 😀
အိမ်လာလည်တာ ကျေးဇူးနော် …
နှင်းဖတ်လေးတွေ ကျနေတာ … မိုးရေချိုးနေရသလိုမျိုးပဲ …
မိုးရေလောက်တော့ လူကို စိုရွှဲမသွားပေမယ့် ပျော်စရာကြီး …